Fanisam-bahoaka : Hivoaka amin’ny oktobra ny lisitra vonjimaika -
AccueilSongandinaFanisam-bahoaka : Hivoaka amin’ny oktobra ny lisitra vonjimaika
Vita amin’ny ankapobeny ny fanisana ny mponina andiany faha-3 eto Madagasikara. Ny datin’ny 25 jona teo no voalaza fa nifarana tamin’ny fomba ofisialy izany, araka ny filazan’ny tale jeneralin’ny ivotoerana nasionaly misahana ny atontan’isa na ny Instat, Rajaonera Clément. Amin’ny volana oktobra no nambarany fa hivoaka ny lisitra vonjimaika tamin’izany fanisana ny mponina izany. Amin’izao fotoana izao, mijery sy mameno ny taratasy tsy feno hatramin’ny farany sisa no ataon’ny ekipan’ny Instat. Notsipihany koa fa tsy vita 100 isan-jato ny asa rehetra fa manakaiky io salan’isa satria misy ireo mponina no mbola tsy voahisa toy ny any amin’ny faritra Sofia sy Diana ary misy koa ny eto an-drenivohitra. “Ny 25 jona ny daty ofisialy namitana ny fanisam-bahoaka teto Madagasikara. Any amin’ny faritra Sofia sy Diana no mbola misy fanontaniana vitsivitsy fenoina fa naman’ny efa vita ihany. Misy kosa ny laharana maitso 919 maitso azo antsoina hatramin’ny faran’ny volana jolay izao raha misy trano tsy nandalovana. Raha ho an’ny any ambanivohitra dia manantona eny amin’ny fokontany raha tsisy finday. Fa na izany aza, tsy manimba ny vokatra faobe satria nandray andraikitra avokoa ny olona rehetra”, hoy ity tale jeneralin’ny Instat ity.
Nomarihany ihany koa fa manomboka androany ny fizarana ny karaman’ireo niasa tamin’ny fanisana nitety tokantrano ary eto an-drenivohitra no hisitraka izany voalohany noho eto be mponina sy misy banky ka mora karakaraina. “Fa alohan’ny hamoahana ny tambim-karama dia jerena ny isan’ny tokantrano nandalovana izay vao alefa ny fandoavan’ny volan’ireo mpanisa. Efa manomboka tsikelikely ny fandoavana azy amin’izao fotoana izao, izay miankina amin’ny toerana, toy ny eto Antananarivo izay efa manomboka satria be mponina noho ihany koa misy banky ka mora karakaraina. Marihiko fa tena sarotra ny fanantanterahana ny famoahana ny vola. Misy fepetra be dia be izay mila fotoana izay mahatratra hatrany amin’ny iray volana sy iray volana sy tapany ny fepetra rehetra vao to ary izay vao afaka mamoaka vola nefa ilay mpanisa vahoaka efa mimenomenona”, hoy ny fanamarihan- dRajaonera Clément, tale jeneralin’ny Instat hatrany.
Nambarany moa fa tany amin’ny faritra Menabe no tena sarotra indrindra ny fanisana noho ny tsy fandriampahalemana. Voatery mantsy niaraka tamin’ny mpitandro filaminana ireo mpanantanteraka ny fitsidihana tokantrano. Teo koa ireo toerana tena saro-dalana.
Efa miditra tsikelikely anatin’ny vanim-potoana fahavaratra isika ankehitriny. Nandrava zavatra maro teto amin’ny firenena hatrany ny fandalovan’ireny rivodoza ireny, izay tsy misy afaka misakana ny fisiany sy ny heriny, toraka izany koa anefa ny haintany ...Tohiny